भिडियो रिपोर्ट « Kathmandu Television HD
#नेपाल भारतबीच सीमा
#१६ जना सचिव
बाजुराको एउटा गाउँमा विकासको नाममा पुगेको सास्ती
Published On : 30 January, 2019
राजनीतिको फोहोर सफा गर्ने काम राजनीतिज्ञको होः दाहाल
काठमाण्डौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिको फोहोर सफा गर्ने काम राजनीतिज्ञको भएको बताएका छन्। बुधबार सुन्तली धुर्मुसले फाउन्डेसनले भरतपुरमा निर्माण गर्न लागेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको
केन्द्र सरकार मातहत राख्ने निर्णय पार्टीलाई जानकारी छैन : शर्मा
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा खुलेका अस्पताललाई नभएको जनाएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले
Published On : 29 January, 2019
भेनेजुएलामा जारी राजनीतिक संकटबारे धारणा सार्वजनिक
काठमाडौं– नेपाल सरकारले गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलवार विज्ञप्तिमा जारी गर्दै भेनेजुएलाको संकट आन्तरिक भएको र त्यसलाई सुल्झाउन त्यहाँका जनता सक्षम रहेको स्पष्ट पारेको छ। कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा
राजनीति भनेकै संघर्ष र सेवा हो । संघर्ष गर्दा गर्दै जनताको सेवा गर्ने उद्देश्य लिएर एक राजनीतिकर्मी आफ्नो बाटोमा तल्लीन हुन्छ । कम उमेरमै संघर्षका अनगिन्ती पहाड पार गर्दै जीवनका
१६ जना सचिवको कार्यक्षेत्र हेरफेर, कस्को कार्यालय कुन ? सूचीसहित
काठमाण्डौं । सरकारले फेरि सचिवहरुको कार्यक्षेत्र हेरफेर गरेको छ । सोमवार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले १६
राय, ज्ञवाली, शर्मा, श्रेष्ठ सचिवमा बढुवा, बढुवा हुनेमा दुई प्रशासन र दुई प्राविधिक
काठमाण्डौं । सरकारले चार जना उपसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । सोमवारको मन्त्री परिषद् बैठकले
लामिछानेसहित ३ जनालाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न आदेश, ‘यस्ता छन् म्याद थप्नुको ५ कारण’
चितवन । शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चारकर्मी रवी लामिछानेसहित ३ जनालाई जिल्ला अदालत